MAITIRO EKUVHARIRA ANOTSAMWISA YOUTUBE ADS NEKUDZVANYA KAMWE CHETE - NYORO
Maitiro Ekuvharira Anotsamwisa YouTube Ads neKudzvanya kamwe chete
YouTube ndiyo yechipiri injini yekutsvaga ine mamirioni evashandisi vakavimbika pasirese. Iwe unogona nyore nyore kuona hova dzinorarama kana zvimwe zvemukati zvemavhidhiyo papuratifomu. Kune chimwe chinhu kune wese munhu paYouTube. Vashandisi vanosarudza kutarisa zvirimo paYouTube kupfuura chero imwe chikuva sezvo iri sosi huru yevaraidzo. Nekudaro, chimwe chinhu chinogumbura nezveYouTube kushambadza kunobuda paunenge uchiona vhidhiyo. Isu tinonzwisisa kuti nerubatsiro rweaya ma ads, ivo vagadziri veYouTube vari kuita mari, asi chinotishungurudza huwandu hwezviziviso zvatinofanira kuona tichiona vhidhiyo. Naizvozvo, kugadzirisa dambudziko iri rinogumbura kune wese munhu, tine mutungamiriri pa maitiro ekuvharira YouTube kushambadzira iwe aunogona kuteedzera kubvisa zvisingadiwe kushambadza paYouTube.
Zvikonzero zvekuvharira YouTube Ads
4 Nzira Dzokudzivisa Kushatirisa YouTube Ads
Maitiro 1: Tora YouTube Premium
Maitiro 2: Shandisa Chrome Kuwedzeredzwa
Maitiro 3: Shandisa iyo URL yekuvhara kuvharidzira kushambadzira
Maitiro 4: Shandisa ViewPure webhusaiti
Chikonzero chega nei vashandisi vachida kuvharira shambadziro dzinotsamwisa paYouTube ndeyekuti vawane zvirinani zvemukati wekushambadzira ruzivo pachikuva pasina kupindira Nguva yezviziviso izvi inogona kubva pamasekonzi makumi matatu kusvika pamaminetsi matatu , izvo zvinoshungurudza kana iwe ukawana akawanda ma ads mune imwechete vhidhiyo.
apo google chrome inomira kushanda
Kana iwe uchida kubvisa zvinotsamwisa YouTube kushambadzira, saka unogona kuenda kune a YouTube Premium kunyorera . NeYouTube Premium, haugamuchire chero kushambadzira iwe uchiona vhidhiyo . Zvakare, iwe unogona zvakare kutamba yako YouTube playlist kana chero imwe vhidhiyo kumashure neYouTube premium.
Uyezve, iwe unowana chiitiko chinotsvedza nezvakawanda maficha senge premium YouTube mimhanzi nekutamba. Iwe zvakare une mukana wekutora yakokufariraYouTube mavhidhiyo.
Iwo maprimiyamu ekunyorera zvirongwa anodhura, uye zvinotanga kubva Rs129 / mwedzi . Iwe unogona zvakare kusarudza yemahara muedzo . Nezve iyo mitengo yemitengo, unogona kudzvanya pano .
Kune akatiwandei-echitatu-bato ekuwedzera anowanikwa pane chrome browser yaunogona kushandisa kudzivirira izvo kushambadza pane YouTube mavhidhiyo. Imwe yekuwedzera kwakadai ndeye Adblock yeYouTube iyo iwe yaunogona kuisa kubva ku Chrome webhu chitoro.
1. Vhura yako Chrome browser uye musoro ku Chrome webhu chitoro .
windows 10 yakakosha kukanganisa kutanga menyu haisi kushanda
2. Type Adblock yeYouTube mubha yekutsvaga uye tinya pane kuwedzerwa kubva pamhedzisiro yekutsvaga.
3. Tapira pamusoro Wedzera kuChannel .
4. Dzvanya pa Wedzera kuwedzera kuiisa.
5. Mushure mekubudirira kuwedzera kuwedzerwa, unogona kuibaya padhuze neako rekuwedzera icon kuti uwane zvirinyore kuvharidzira kushambadza paYouTube .
6. Zvino, tamba vhidhiyo yeYouTube .
7. Pakupedzisira, tinya pane iyo kuwedzera kubva kumusoro-kurudyi kona yewindo rako uye batidza toggle on yekubvisa.
mutyairi irql zvishoma kana kuti haana kuenzana
Ndizvo; uku kuwedzera kweChannel kuchavhara kushambadzira kunogumbura iwe, uye iwe unogona kuona mavhidhiyo pasina chipingaidzo.
Uyezve Verenga: Maitiro Ekuziva Kana Mumwe Munhu Akavharira Yako Nhamba Pane Pane Android
Maitiro 3: Shandisa iyo URL kubhinya kuvharidzira kushambadzira
Teki yakaedzwa uye yakaedzwa yekuvhara YouTube kushambadzira ndiyo URL yekunyepedzera. Uku kunyengera kunosanganisira kuwedzera chiratidzo chenguva mu URL kero yevhidhiyo iyo yauri kutarisa paYouTube. Uku kubira kunoshamisa kwaunogona kushandisa kana uri kushamisika maitiro ekuvharidzira YouTube kushambadza neyakareruka URL hunyengeri. Kuti ushandise ichi kubira, unogona kutevedzera maitiro pazasi.
Kazhinji kero ye URL yechinhu chero chaunotarisa paYouTube inoita senge https://www.youtube.com/watch? […]
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuwedzera nguva ( . ) chiratidzo mushure chaimo youtube.com.
Yako itsva URL kero inotaridzika seiyi: https://www.youtube.com ./watch? […]
Paunowedzera chiratidzo chenguva mu URL kero yevhidhiyo iyo yaunoda kutarisa, hauchazogashira chero shambadziro inotsamwisa iwe uchiona iyovhidhiyo. Nekudaro, iwe unozongokwanisa chete kushandisa ichi cheki pane desktop desktop yeYouTube. Kana iwe uchida kushandisa iyo URL kubira pafoni yako, uchafanirwa kugonesa desktop saiti sarudzo pane browser rako . Kugonesa iyo saiti yedesktop, vhura Google Chrome> pombi pamatanho matatu akamira pakona yepamusoro kurudyi kwescreen> Sarudza Desktop saiti.
Imwe nzira yaungashandisa kana iwe usingazivemaitiro ekuvharidzira YouTube kushambadza,ndeye kushandisa iyo ViewPure webhusaiti . Iyi webhusaiti inobvumira vashandisi kuona zviri nyore chero vhidhiyo yeYouTube pasina zvinovhiringidza kana kushambadzira pakati . Tevedza nhanho idzi kushandisa iyoViewPurewebhusaiti.
1. Vhura bhurawuza rako uye tungamira kune ViewPurUyewebhusaiti .
yakaipa system gadziriso info windows 10 2019
2. Vhura Youtube uye teedzera iyo URL yevhidhiyo iyo iwe yaunoda kutarisa pasina chero kushambadzira.
sei kudzima akawanda instagram zvinyorwa
3. Zvino, namatidza URL yevhidhiyo yeYouTube mubhawa rekutsvaga paneViewPurewebhusaiti inoti ' Pinda YouTube URL kana izwi rekutsvaga . ’
4. Pakupedzisira, tinya Chenesa uye tarisa vhidhiyo yako pasina kushambadzira.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo (MIBVUNZO)
Q1. Zviri pamutemo kuvhara YouTube kushambadza?
Hazvisi pamutemo kuvhara YouTube kushambadza, uye vashandisi vanogona kushandisa ad-ichivharira ekuwedzera kudzivirira kuona kushambadzira kuri pakati peYouTube mavhidhiyo. Asi, vashandisi havana mvumo yekukanganisa kodzero yemuparidzi yekushandira kana kudzora kupinda kune zvemukati zvemapuratifomu pachikuva.
Q2. Ini ndinodzivirira sei YouTube kushambadza paChannel?
Kuvharidzira kushambadza kweYouTube pane browser yeChannel, unogona kushandisa yekuwedzera yeAd-block inonzi ' Adblock yeYouTube ’Kana kumwe kuwedzererwa kwaungawana pane yewebhu webhu. Iwe unogona zvakare kushandisa iyo URL kubira kuvharidzira YouTube kushambadzira.
Maitiro Ekuvharira uye Kuvharidzira Webhusaiti paGoogle Chrome
Maitiro Ekuita Vhidhiyo Kufona Pane Teregiramu
9 Nzira dzekugadzirisa Meseji Isina Kutumwa Kanganiso pane Android
Maitiro Ekumisa Pop-up Ads pane Android
Isu tinovimba mutungamiriri wedu pa Maitiro ekuvharidzira YouTube kushambadzira yakabatsira, uye iwe wakakwanisa kubvisa zvinotsamwisa kushambadza pamaYouTube mavhidhiyo. Kana iwe waifarira chinyorwa, tiudze isu mune zvakataurwa pazasi.
facebook hapasisina zvinyorwa zvekuratidza
disassociate faira mhando windows 10
dzakamirira kugadziridzwa uye kuongorora kunovaka
hatina kukwanisa kupedzisa iwo ekuvandudza windows 10
chirongwa ichivhura uye ichivhara nekukurumidza windows 10